Khabar Kantipur » यी हुन सरकारको आँखा बिजाएपनि जनताको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्वहरु
काठमाडौं। कसैले बरिष्ठ विजय लामालाई नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि)ले प्रवक्ता हटाइएको र पाइलटबाट निलम्बन गरिएकोको खबर सुनिरहँदा एर्कातिर निलम्बन फुकुवाको खबर आइरहेको थियो ।
लामै अलमलपछि लामालाई प्रवक्ताबाट हटाइएको तर, विमान उडान भने दिइएको प्रष्ट हुन आयो । दुई मध्ये एक जिम्मेवारी रोज्न भनिएकोमा अन्ततः प्रवक्ताबाट हटाइएको पत्र निगमले लेखेका छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ– विजय लामा प्रवक्ताबाट हटे ।
नियुक्तिपत्र दिइएको चार महिनामै विजय लामालाई प्रवक्ताबाट हटाउनुपर्ने कारणले भने आम सर्वसाधरणले सरकारकै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
हुनपनि, प्रवक्ता लामाले राष्ट्रिय ध्वजा बाहक विमानलाई उड्न नदिएर विदेशी विमानलाई लाभ पु¥याउन चलखेल भइरहेको आसयमा अन्तरवार्ता दिएका छन् । यसैलाई आधार मानेर निगमले लामालाई प्रवक्ताबाट हटाएका हुन् ।
गत पुस ४ गते नेपाल वायु सेवा निगमले बरिष्ठ कप्तान लामालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । अशोक सिग्देललाई हटाएर लामालाई दिइएको प्रवक्ता यति चाँडै किन खोसियो ? धेरैले प्रश्न उठाएकै छन् ।
तर, बरिष्ठ कप्तान लामाले भने प्रष्ट भनेका छन्– चैत १९ गते दुबइको उडान रद्ध गर्नुको कारण थाहा पाउनुपर्छ । चार मिनेटको समय नदिएर किन उडान रद्ध गरियो ?
लामाले अन्तरवार्तामै यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि निगमले वैशाख ४ गते सात दिने प्रष्टिकरण सोधेको थियो । तर, त्यो पत्रमा पनि निगमले चित्त नबुझाउदै प्रवक्ता पदबाट बर्खास्त गरेको छ ।
अभिनेता र गायक समेत बनेर धेरै नेपालीका मन जितेका लामाको आक्रोश अनि प्रवक्ता पद खोसुवाबारे सरकारी अधिकारीहरुले प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् । तर, केही समय अगाडि लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माविरुद्ध खनिएको नेकपा पंक्ति अहिले फेरि विजय लामाविरुद्ध खनिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सँगै, ३७ वर्ष निजामति क्षेत्रमा बिताएका प्रेम सञ्जेलले पनि अभिव्यक्तिकै कारण अप्ठ्यारो खपिरहेका छन् ।
जनमनमा बसेका पशुपति शर्मा, ३२ वर्ष नेपाली आकाशमा बिताएका विजय लामा र ३७ वर्षे सेवा गरेका प्रेम सञ्जेल सरकारको आँखा बिजाउने पछिल्ला प्रकरण बनेका छन् भने आम वृत्तमा भने यी तीनै जना प्रिय देखिएका छन् ।
यस्तो छ, विजय लामाको असुन्तष्टि पत्र:
सत्यलाई जति सुकै लुकाएर राखेपनि दबाएर राखे पनि कहिले लुकाउन सकिन्न । दबाउन सकिन्न । किनकी सत्य सत्य नै हुन्छ यस्को कुनै बिकल्प हुन्न ।
नेपाल वायु सेवा निमगप्रतिको रुष्ट व्यवहार र हेपाह प्रवृत्तिबारे बोल्नु नै छैन ! यो त (स्वयमसिद्ध तथ्य हो भनेर) साबित पनि गरिरहनु पर्दैन । किनकी आफै निक्लदैछ । एक एक गरि बिस्तारै कस्ले, कहाँ र कसरी हेपिरहेका छन् भनेर । धैर्य भएर बस्नु मात्र पर्छ सबै दुधको दूध पानीको पानी हुन्छ ।
अब त समय भइसक्यो सबैले बुझ्नुपर्ने किन नेवानि पछाडि परेको रहेछ अनि विकाश हुन सकेन भनेर । किन तीन करोड जनताको एयरलाइन्सलाई यसरी पाखा गरेर तुच्छ किन बनाइएको छ भनेर ? किन हरेक काममा बाधा सिर्जना गरी काम गर्न गाह्रो बनाइएको छ भनेर ?
किन हाम्रा ती दाजुभाइ दिदी हिनीहरु ज्सले विदेशमा रगत पसिना बगाउन जाने र बगाएर फर्कनेहरुलाइ सुविधा जनक सेवा प्रदान गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने र पानी पनि किनेर पिउनुपर्ने एयरलाइन्सहरुबाट उड्नु बाध्य बनाउने ?
रास्ट्रिय ध्वजा बाहकलाई हरेक कुरामा सहुलियत प्रदान गर्नु मिल्दैन ? इन्धनको मूल्यमा फाइदा न राखिदिन मिल्दैन ? जतिको त्यतिमै । न्यूनतम कर लगाए हुन्न र ? मन्त्रालयले उडान, अवतरन, पार्किङ र अरु शुल्कमा छुट दिलाए त टिकटको मूल्य घटाएर नेपाली जनतालाई सुविधा दिन मिल्दैन र ? एउटै मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने दुईटा संस्था एनएसी र क्यानले एक अर्कोलाई साथ दिएर देश विकाशमा सहयोग काम गर्न मिल्दैन र ?
नेवानिमा सबै राम्रा छन् या राम्ररी काम गर्छन् भनेको होइन मैले ! हाम्रा पनि प्रशस्त कमीकमजोरी छन् । जसलाई सच्याउन नितान्त आवश्यक छ अनि यहाँ पनि त्यस्ता केही काम ठगुवा, गफाडी, भ्रष्टाचारी एवम् अब्यवसायिक कर्मचारी छन् ।
जसको कारण बदनाम भएको छ नेवानि त्यस्तालाई नङ्ग्याई दिन, पक्राउ गर्न साथ दिनु होस्, हामीलाई । ताकी ती भ्रष्टहरूको कारण सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नराम्रो नहोस् अनि बद्नामी सहन नपरोस् अनि देशको इज्जत माटोमा नमिलोस् ।
अहिलेको समय नेवानिको लागि चुनौती पुर्ण समय बनेको छ । चारै तिरबाट आएको प्रहारको सामना गर्नु परेको अवस्थामा वार कि पार गर्नैपर्छ।
देशको अस्तित्वको लागि पनि राम्रो बनाएर फेरि ती पुराना दिनहरु फर्काउनु नै पर्छ जब सबैले नेवानिलाई अरु एयरलाइन्स् भन्दा बढी रुचाउथे । असम्भव छैन तर, त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले इमान्दारीताका साथ ३६५ दिन नै काम गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको साथ सँगै नेपाल सरकारको सकारात्मक साथको आवश्यकता पनि छ ।
हामी नेवानिमा परिवर्तन ल्याउन तयार छौ । तपाईंहरु साथ दिनलाई तयार हुनुहुन्छ ?
सम्पूर्ण नेवानि परिवारमा प्रवक्ता भएको नाताले मेरो निवेदन यही छ कि आवेशमा आएर कतै पनि प्रतिक्रिया नदिनु होला ! हामी र्छौ त्यसका लागि । म र मेरो सह–प्रबक्ता नवराज कोइराला !
प्रकाशित मिति May 8, 2019